Iindaba - Ziyintoni ii-electrode ze-Stick?
I-electrode zentsimbi ziingcingo zentsimbi ezibhakwe kwityathanga leekhemikhali. Intonga isetyenziselwa ukugcina i-arc ye-welding kunye nokubonelela ngesinyithi sokugcwalisa esifunekayo ukuze ilunga lidityaniswe. Ukutyabeka kukhusela isinyithi ekonakaleni, kuzinzise i-arc, kwaye kuphucule i-weld. Ubukhulu becala locingo, kunciphisa ukutyabeka, umisela ubungakanani bentsimbi yokuwelda. Oku kuchazwe kumaqhezu e-intshi afana no-3 / 32″, 1/8 ″, okanye 5/32. ” Ubuncinci bobubanzi buthetha ukuba bufuna ngaphantsi ngoku kwaye bubeka inani elincinci lesinyithi sokugcwalisa.
Uhlobo lwesiseko sesinyithi esenziwe nge welding, inkqubo ye-welding kunye nomatshini, kunye nezinye iimeko ezimisela uhlobo lwe-electrode esetyenzisiweyo. Umzekelo, ikhabhoni esezantsi okanye "intsimbi epholileyo" ifuna intonga ye-welding. I-Welding cast iron, i-aluminium okanye ubhedu ifuna iintonga ze-welding ezahlukeneyo kunye nezixhobo.
Ukutyabeka kwe-flux kwii-electrode kumisela ukuba kuya kusebenza njani ngexesha lenkqubo yokwenziwa kwe-welding. Okunye kokutsha kokugquma kunye nokutshisa okutshisayo kwenza umsi kwaye usebenza njengekhaka elijikeleze "iphuli" yokuwelda, ukuyikhusela kulomoya uyijikelezileyo. Icandelo lokunyibilika liyanyibilika kwaye lixubeke ngocingo emva koko lihambise ukungcola kumphezulu. Oku kungcola kuyaziwa ngokuba yi "slag." I-weld egqityiweyo iya kuba buthathaka kwaye ibuthathaka ukuba kungenjalo ngenxa yokuhamba. Xa idibeneyo edibeneyo ipholile, i-slag ingasuswa. Isando esinqunqwayo kunye nebrashi yocingo zisetyenziselwa ukucoca kunye nokuvavanya i-weld.
Ii-electrode zentsimbi-arc welding zinokudityaniswa njengee-electrode ezingenanto, ii-electrode ezifakwe ukukhanya, kunye ne-arc ekhuselweyo okanye ii-electrode ezibotshwe nzima. Uhlobo olusetyenzisiweyo luxhomekeke kwiipropathi ezithile ezifunekayo ezibandakanya: ukumelana nokumelana, ukungabinamandla, ukuqina okuphezulu, uhlobo lwesiseko sesinyithi ekufuneka sidityaniswe; kunye nendawo iwelding ethe tyaba, ethe tyaba, nkqo, okanye ngaphezulu.
Ixesha Post: Apr-01-2021